Wholesale GQ-208 Compound Antifreeze Agent fekitari uye vagadziri | Gaoqiang
GQ-208 Makemikari Antifreeze Mumiriri
GQ-208 inoumbwa nechinhu chinodzikisira mvura uye zvakasiyana siyana zvisikwa, organic antifreeze chinhu uye chekutanga simba chikamu. Inonyanya kushandiswa mukuvakwa kwechando kwemarudzi ese ekongiri-in-nzvimbo kongiri, precast kongiri. Chigadzirwa chigadzirwa kune JC475 uye mamwe maitiro.
GQ-208 inoumbwa nechinhu chinodzikisira mvura uye zvakasiyana siyana zvisikwa, organic antifreeze chinhu uye chekutanga simba chikamu. Inonyanya kushandiswa mukuvakwa kwechando kwemarudzi ese ekongiri-in-nzvimbo kongiri, precast kongiri. Chigadzirwa chigadzirwa kune JC475 uye mamwe maitiro
1.Kunyatso kudzora iyo inotonhora nzvimbo yemahara emvura mukongiri kudzivirira chando.
2.Kurudzira iyo hydration yesimende pasi yakaderera tembiricha mamiriro, kugadzirisa ekutanga simba rekongiri, kuwedzera kugona kwechando kuramba
3.Iine hunhu hwesimba rekutanga, kusimudzira, kudzikisira mvura uye kusunga kwemhepo. Inogona kushandiswa seyokutanga simba mumiririri.
4.Improve epanyama uye zvemaziso zvimiro zvekongiri, kunatsiridza mukurumari indekisi
5.Low alkali, hapana ngura kune simbi bhaa. Isina-chepfu, isina kukuvara, yakachengeteka kune hutano uye nharaunda
1.Inokodzera kuvakwa kwechando kwemarudzi ese ekongiri-mu-nzvimbo kongiri, precast kongiri, ese marudzi evhu, nezvimwe
Inogona kushandiswa mukuvakwa kwechando kwemigwagwa, nhandare, mabhiriji, simba remagetsi, kuchengetedza mvura, madoko uye mapurojekiti eruzhinji neindasitiri.
3.Inogona kusanganiswa nemvura-inoderedza mumiririri kugadzirira epurasitiki kongiri uye pombi kongiri
4.D3 inoshanda kune yekuvaka pasi pemamiriro ekunze aine tembiricha yakatarwa iri -15 ℃ kana tembiricha yechisikigo isiri pasi pe -20 ℃; D4 inokodzera kuvakwa pasi pemamiriro ekunze aine tembiricha yakatarwa pa -10℃ kana tembiricha yechisikigo isiri pasi pe -15 ℃
Chipimo chemushonga: upfu 2.0 ~ 3.0%; Mvura yaive 2.0 ~ 3.0% (yakaverengerwa neuwandu hwesimbi yezvinhu).
Iyo poda inogona kuwedzerwa kune musanganisi pamwe neakaunganidzwa; Liquid inogona kusanganiswa nekusanganisa mvura, zvakakodzera kuwedzera iyo nguva yekusanganisa. Mvura inopisa inofanirwa kushandiswa munzvimbo yekuvaka panobvumidzwa nemamiriro ezvinhu.
Iyo aggregate haifanire kusanganiswa nechando, chando, boka rakagwamba nechando, nezvimwewo, uye uwandu hungangopiswa kana mamiriro ezvinhu achibvumidza.
Munguva yechando kuvaka kongiri kuwedzera kune anti-kutonhora mumiririri panguva imwe chete zvakadaro inofanirwa kunyatsoita iyo "Nguva yechando yekuvaka hunyanzvi mirau", kudira kongiri kunofanirwa kuve kwakavharwa nenguva nefirimu repurasitiki, simbisa kuputira uye kugadzirisa
Iyo yakakwana dosi inofanirwa kutemerwa zvinoenderana nemamiriro ekushisa uye hunyanzvi zvinodiwa usati washandisa ichi chigadzirwa
Kuisa & Kuchengeta
Upfu nepurasitiki rakarukwa bhegi kurongedza, 50㎏/ bhegi; Liquid nedhiramu, 250㎏/ dhiramu kana hombe yekufambisa tangi
Unyoro humbowo, hwepamusoro tembiricha chiratidzo, kukuvadza chiratidzo Iyo nguva yechokwadi ndeyegore rimwe, mushure mekupera, inofanirwa kusimbiswa nemuyedzo kuti ushandiswe zvakare
Ichi chigadzirwa hachikuvadzi uye chinoputika, chichengete zvakanaka.
Zvadaro: GQ-KG (L) / 01/02 Cable Grouting Mumiriri